Izochi Unsubscribe abụghị Usoro Nzuzo | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2012 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2012 Douglas Karr
Anyị na-enyocha ọtụtụ ọrụ ka anyị wee dee banyere ha na blọọgụ ma ọ bụ jiri ha maka ndị ahịa anyị. Otu usoro anyị na-amalite ịhụ karịa na ndị ọzọ bụ ọrụ na-enye gị ohere ịmalite akaụntụ ngwa ngwa, mana ha enweghị ụzọ ọ bụla isi kagbuo ya. Echeghị m na nke a bụ nlekọta… na ọ ozugbo amama m ụlọ ọrụ.
Ejiri m ihe dị ka nkeji iri na ise n'ụtụtụ a. Ọrụ nlekota oru mgbasaozi nke ndi mmadu nyere ikpe n'efu ya mere m debanyere aha. Mgbe ihe dị ka izu 2, amalitere m inweta ozi ịntanetị nke dọrọ m aka na ntị na ikpe m agwụla. Mgbe ụbọchị 30 gasịrị, amalitere m ịnata ozi ịntanetị kwa ụbọchị nke gwara m na oge m agwụla ma nwee njikọ na ebe m ga-esi nweta nkwalite na akaụntụ akwụ ụgwọ.
Email ahụ wepu njikọ kpọbatara m na peeji nke nbanye akaụntụ. Grrr… inwe nbanye ịwepu aha bụ anụ ụlọ m ọzọ. Ebe ọ bụ na m na-abanye ma agbanyeghị, echere m na m ga-akagbu akaụntụ. Agara m na peeji nhọrọ akaụntụ ma naanị nhọrọ dị iche iche nhọrọ nwelite - enweghị kagbuo nhọrọ. Ọbụna na ezigbo ebipụta.
N'ezie, enweghịkwa ụzọ isi rịọ nkwado. Naanị Ajụjụ. Nyochaa ngwa ngwa banyere Ajụjụ na enweghị ozi gbasara ịkagbu akaụntụ. Obi dị m ụtọ, nchọpụta dị n'ime nke Ajụjụ ndị ahụ nyere azịza ya. A kagbuo njikọ e liri na tabul taabụ n'ime njirimara onye ọrụ.
Nke a na echetara m ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ… ebe ị nwere ike ịdebanye aha n'ịntanetị ọtụtụ oge, mana ị ga-akpọ ma chere ka ịgwa onye nnọchi anya ndị ahịa ịkagbu aha gị. Na… kama ịkagbu ya, ha na-agbalị na-enye gị ndị ọzọ na ndenye aha nhọrọ na onyinye. Anọ m na ndị a n'ekwentị ebe m nọ na-ewe iwe nke na m mere ugboro ugboro "kagbuo akaụntụ m" ugboro ugboro ruo mgbe ha kwenyere.
Ndi be anyi, oburu na nka bu nke gi njigide atụmatụ, ị nwere ọrụ ị ga-arụ. Na, ị na-echekwa nsogbu na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị site na ikpuchi ezi njide ndị ahịa gị. Kwụsị ya! Kagbu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kwesịrị ịdị mfe dịka ịdebanye aha maka otu.
Scott Wyden Kivowitz kwuru
Aug 27, 2012 na 7:26 PM
Ọ na-echu m ụra nke ukwuu mgbe m hụrụ nke ahụ. Ozugbo m nwetara email na njikọ ọjọọ wepu aha m, ana m akara ya dị ka spam ma ọ bụrụ na nke ahụ anaghị enyere aka, mepụta iwu ka ịhichapụ ha ozugbo.